🥇 ▷ Redmi note 8 ayaa dunida oo dhan dhowaan lagu soo bandhigi doonaa ✅
Redmi note 8 ayaa dunida oo dhan dhowaan lagu soo bandhigi doonaa
Dhamaadkii bishii Ogosto, Redmi wuxuu soo saaray labo ka mid ah taleefannadii laga filayay ee qarniga dambe, Redmi Note 8 iyo Redmi Note 8 Pro. Labadan Terminal ayaa hadda laga heli karaa Shiinaha oo keliya, in kastoo Soo saaristiisa adduunka ayaa umuuqata inay dhacda waqti aad u yar, sida ku cad sawirka aan ku aragnay mahadsanid filterka Mukul Sharma ee akoonkaaga akoonkaaga. Sawirkani wuxuu muujinayaa in bilowga adduunka uu soo dhowaanayo.
Waxaan hadda ogaanay in Xiaomi Mi 9 Lite lagu soo bandhigi doono Isniinta soo socota Spain. Qaabkani wuxuu ku saabsan yahay Xiaomi CC9 laakiin caan, terminal aan ka wada hadalnay markii la soo bandhigay. Ku saabsan Redmi Note 8 iyo Redmi note 8 Pro anagana waanu kula hadalnay si isdaba joog ah oo aad faahfaahinta oo dhan halkan ku leedahay Android Pro, in kasta oo aan kuu xasuusin doonno si kastaba.
Redmi Note 8 Pro iyo Xusuusta 8 ayaa imaan doonta goor dhow
Midka hore waa kan koowaad. Sawirka la sifeeyay ayaa na tusaya “boqorka ayaa imanaya”. La’aan intaa ka badan maahan wax ina siinaya tilmaamo badan, laakiin waa muuqaal xayeysiis ah oo Ingiriis ah, marka ay caadi u tahay munaasabadaha ka dhacaya Shiinaha, waa inay ku timaado Shiinaha, sida iska cad. Tani waxay muujineysaa inay haa tahay, soo bandhigida caalamiga ah ee taxanaha Redmi Note 8 ayaa dhici doonta waqti yar. Waxay noqon kartaa maalmo ama toddobaadyo, laakiin wax ayaa noo sheegaya in siidayntaasi dhici doonto ka hor dhamaadka bisha Sebtember.
Boqorka ayaa imanaya. Soosaarid caalami ah goor dhaw.#redmi #xiaomi # note8pro # note8 pic.twitter.com/OLuIYBspoa
– Mukul Sharma (liisaska liiska) Sebtember 12, 2019
Bartii tweet-ka su’aasha, waxaan ku aragnaa in Redmi laga wada hadlay Note 8 Series, isagoo xusay labada nooc ee Redmi Note 8, in kasta oo tixgelin la siinayo in Note 8 caadiga ah uu sido isla processor-kii sida Xiaomi Mi A3, Waan arki karnaa sida qaabkan uusan u imaan karin gudaha. Sikastaba, waa macquul uun, maxaa yeelay Redmi Note 7 iyo Xiaomi Mi A2 sidoo kale waxay wadaageen processor. Sikastaba, waxaan kugu tageynaa astaamaha labada nooc si aad u ogaato kala duwanaanshahooda.
shaashadda 6.3 inji IPS FullHD + 6.53 inji IPS FullHD +
RAM 4 ama 6 GB 6 ama 8 GB
Kaydinta 64 ama 128 GB 64 ama 128 GB
Gadaal kamaradaha 48 megapixel ugu weyn 64 megapixel ugu weyn
8 megapixel xagal ballaaran 8 megapixel xagal ballaaran
2 megapixel macro 2 megapixel macro
2 megapixel qoto dheer 2 megapixel qoto dheer
Kaameerada hore 13 megapixels 20 megapixels
Naqshadeynta Birta iyo dhalada Birta iyo dhalada
Durbaan 4,000 mAh oo wata 18W oo degdeg ah 4,500 mAh oo wata 18W oo degdeg ah
Tilmaamo dheeri ah Nooca USB-ga ah ee C iyo 3,5mm Nooca USB-ga ah ee C iyo 3,5mm
Nidaam Android 9.0 Foot oo ka hooseysa MIUI 10 Android 9.0 Foot oo ka hooseysa MIUI 10
Cabirrada 158.3 x 75.3 x 8.4 mm 161.3 x 76.4 x 8.8 mm
Miisaan 190 garaam 199 garaam